नेपाल र भारतको बजारसम्म चल्ने भारतीय नम्बरका टेम्पु रोक्न अ’दालतको आ’देश..हेर्नुहोस् ।
गौर : एक दशकदेखी निर्वाध रुपमा गौर बजारमा सञ्चालन हुँदै आएका भारतीय नम्बर प्लेटका तीनपांग्रे टेम्पु नियन्त्रण गर्न उच्च अ दालतले आ’देश दिएको छ। तत्कालीन रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा. कमलेसकुमार सिन्हाले २०६६ चैत १३ गते उनकैै अध्यक्षतामा जिल्लामा सर्वपक्षीय बैठक राखेर भारतीय नम्बरका टेम्पोलाई भन्सार नतिरी गौर बजारमा सञ्चालन गर्न अनुमती दिएका थिए।
त्यसयता सबै प्रजिअले सो निर्णयलाई म्याद थप गर्दै टेम्पो सञ्चालन गर्न अनुमती दिँदै आएका थिए। पछिल्लो पटक २०७५ पुस ३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सूचनाको विषयमा अदा’लतले आ’देश दिएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नै यस्तो निर्णय गरेपछि गौरका टांगा व्यवसायीले वि’रोध जनाउँदै आएका थिए। भारतको बिहार राज्यको बैरगनियादेखी रौतहट सदरमुकाम गौरसम्म सञ्चालन हुँदै आएका भारतीय नम्बरका तीनपांग्रे सवारीसाधन नियन्त्रण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटलाई आ’देश दिएको हो।
नियम कानूनलाई बेवास्ता गरी व्यवसायीले नेपालको गौर र भारतको बैरगनिया बजारसम्म भारतीय नम्बर प्लेटका दर्जनौं टेक्पो दैनिक चल्ने गरेका छन्। भन्सार नियमानुसार अन्य देशमा दर्ता भएका सवारीसाधन भाडा लिने प्रयोजनमा सञ्चालन गर्न नपाइने नियम छ। नेपालका व्यवसायीको तर्फबाट वीरगञ्ज महानगर—१६ लक्ष्मी मोटर्स प्रालीका सञ्चालक अरुण कुश्वाहाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहट गौरलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलाश वीरगञ्जमा अन्तरिम आदेशका लागि निवेदन दिएका थिए।
न्यायधिशद्धय सत्यमोहन जोशी थारु र विरबहादुर डाँगीको संयुक्त इजलाशले मंसिर ३ गते निवेदनको टुंगो नलागेसम्म भारतीय नम्बरका सवारीसाधन व्यवसायिक प्रयोजनका लागी सञ्चालनमा रोक लगाउन आदेश दिएको हो। विदेशी नम्बर प्लेटको टेम्पुलाई व्यवसायीक रुपमा चलाउन यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ बमोजिम रोक लगाउने विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटबाट मिति २०७५ पुस ३ गतेमा सुचना प्रकाशित गरिएको थियो।
आर्थिक ऐन २०७६ को अनुसूची १ को दफा १२ को उपदफा (ख) बाहेकको अवस्थामा विदेशी नम्बर प्लेटका टेम्पुलाई नेपाली नम्बर प्लेटका सवारीसाधन सरह सञ्चालन गर्न, रात्री पार्किग गर्न गराउन नदिनु भनि विपक्षीको नाममा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। भारतको बैरगनियाबाट गौर चल्ने यात्रुबाहक टेम्पोका अधिकाश चालकसँग सवारी चालक अनुमती पत्र समेत नभएको पाइएको छ।
नेपाल भारत सिमा बजारमा चल्ने अधिकाश टेम्पु नेपाली नागरिकले खरिद गरी चलाउने गरेका छन्। भारतीय नम्बरका यात्रुवाहक टेम्पुलाई व्यवस्थित गर्न प्रशासकीय अधिकृत शशिमोहन दासको संयोजकत्वमा यातायात कार्यालयका इन्जिनियर, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी प्रमुख,
व्यवसायीको समिति बनाइएको छ। वर्षौंंदेखी भारतीय नम्बर प्लेटका टेम्पु सञ्चालन भइरहेको पाइएकाले यो समस्या समाधान गर्न समिति गठन गरीएको रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले जानकारी दिए। समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययन गरी समस्या समाधान गरिने प्रजिअ थापाले बताए।
काठमाडौं : मिर्गौलाको कार्यक्षमतामा ह्रास आएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नियमित हेमोडायलासिसलाई प्राथमिकता दिइएको छ । उनको चौथो पटक आइतबार ग्रान्डी इन्टरनेसनल अस्पतालमा हेमोडायलासिस गरिएको छ । चिकित्सकले अल्पकालीन उपचार पद्धतिका रूपमा हेमोडायलासिसलाई निरन्तरता दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको शरीरबाट हानिकारक तत्व फाल्नका लागि मिर्गौलाको कार्यक्षमता चुस्त राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधानका लागि प्रत्यारोपण नै उपयुक्त भएको निष्कर्ष उपचारमा संलग्न चिकित्सकले निकालेका छन् । यसका लागि स्वदेशी र विदेशी चिकित्सकसँगको परामर्श जारी राखिएको एक चिकित्सकले बताए ।
ग्रान्डी अस्पतालका निर्देशक डा. चक्रराज पाण्डले आइतबार अपराह्न अस्पताल भर्ना भएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई डायलासिसपछि डिस्चार्ज गरिएको जानकारी दिए । ‘प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य परीक्षणपछि चौथो पटक डायलासिस भएको छ’, उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘उहाँले आराम महसुस गर्नुभएपछि हामीले अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरेका छौँ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीकी निजी चिकित्सक एवं वरिष्ठ मिर्गौला रोग विशेषज्ञ डा. दिव्या सिंह शाहले नियमित डायलासिस गराउने वा प्रत्यारोपणबारे टुंगो लागिनसकेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूका लागि जे गर्दा उपयुक्त हुन्छ, त्यही गर्ने हो । अहिले नियमित डायलासिस गरिराखिएको छ । पछि प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीको उपचारमा संलग्न अर्का चिकित्सकले दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने बताए । ‘मिर्गौलाले शरीरमा रगत र क्याल्सियम बनाउने तत्वहरू उत्पादन गर्छ । मिर्गौला पूर्णरूपमा फेल भएपछि डायलासिस गरे पनि शरीरमा रगत र क्याल्सियमको मात्रा बढ्दैन । क्याल्सियमको समस्या कमी हुन नदिन र रक्तअल्पताको समस्याबाट जोगिन पनि प्रत्यारोपण उपयुक्त विकल्प हो । डायलासिस त अस्थायी मात्र हो’, ती चिकित्सकले भने ।
प्रधानमन्‍त्री ओली डायलासिसका लागि ग्राण्डी अस्पतालमा
अहिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई असहज महसुस भए मात्र डायलाइसिस गरिँदै आएको छ । मिर्गौला पूर्णरूपमा फेल भएपछि सातामा दुई वा तीन पटक डायलासिस गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको मिर्गौलाले काम गरिरहे पनि सुधारोन्मुख अवस्थाबारे सूक्ष्म ढंगले निगरानी भइरहेको चिकित्सकले बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले प्रधानमन्त्री आइतबार स्वास्थ्य परीक्षणका साथै डायलासिसपछि बालुवाटार फर्किएको जानकारी दिए । ‘मिर्गौला प्रत्यारोपणबारे कुनै जानकारी छैन’, उनले भने ।
१२ वर्षअघि मिर्गौला फेल भएपछि प्रत्यारोपण गरिएका प्रधानमन्त्री ओलीको अन्य स्वास्थ्य अवस्था राम्रो रहेको डा. शाहले जानकारी दिइन् । ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नुपरेको अवस्थामा स्वदेश वा विदेशमा कहाँ गर्ने भन्ने विषय पनि छलफलमै सीमित छ । ‘नियमित डायलासिस गर्ने कि प्रत्यारोपणमा जाने भन्ने टुंगो लागेको छैन’, डा.शाहले भनिन् । उपनिर्वाचनलगत्तै नियमित डायलासिस वा प्रत्यारोपणबारे निर्णय लिइने स्रोतले जनाएको छ ।
मंसिर १४ को उपनिर्वाचन सकिएपछि उपचारका लागि तय हुने प्रधानमन्त्री ओलीनिकट स्रोतले बताएको छ । हालै अमेरिकामा आयोजित एक कार्यक्रममा भाग लिएर फर्केकी डा.शाहले प्रत्यारोपणका लागि अमेरिका जाने सन्दर्भमा अनभिज्ञता जनाइन् । ‘निजी कार्यक्रमका सिलसिलामा गएकी थिएँ । प्रत्यारोपणको विषयलाई लिएर गएकी होइन’, उनले प्रस्ट्याइन् ।
Previous सरकारी गाडी चढेर गोप्य रुपमा भारतीय दूतावास धाउने डिआइजी माथि कार’बाहीको तयारी..हेर्नुहोस् ।
Next प्रचण्डको बदनाम गरेर कमाउध’न्दा सञ्चालनमा लागेको भन्दै एसपी मल्लको सरुवा..हेर्नुहोस् ।